BANGAPHI ABANTU ABAZAKUBA KOLU PHONONONGO KWAYE NGUBANI ONOKULUJOYINA?
Uphononongo luza kubhalisa malunga namadoda namabhinqa angama-5400 eMzantsi Afrika. Ukuze ujoyine olu phononongo, umntu kufuneka abesempilweni, abe phakathi kweminyaka eli-18 nama-35 ubudala, kwaye angabinayo i-HIV. Umntu kufuneka akulungele ukwenziwa uhlolo lwezonyango, azimase iingcebiso nokuvavanyelwa i-HIV. Akumelanga ukuba amabhinqa akhulelwe okanye ancancise. Kukho neminye imimiselo ekumele ifezekiswe ukuze ukwazi ukujoyina uphononongo.
YINTONI ONOKUYILINDELA UKUBA UGQIBA KWELOKUBA UVOLONTIYE?
Siza kuphendula nayo nayiphi na imibuzo onayo ukuqinisekisa ukuba uyakuqonda okubandakanyekayo ngokuthath’ inxaxheba kolu phononongo.
Uza kwenziwa uvavanyo lomzimba oluquka uvavanyo lwegazi. Iisampuli zegazi ziza kusetyenziselwa ukuvavanya ulosuleleko lwe-HIV; indlela asabela ngayo amajoni omzimba kwiimveliso zophononongo, uvavanyo oluncinci lwemfuza nolunye uvavanyo luza kunceda abaphandi ekubeni bayiqonde ngcono impilo namajoni omzimba omthathi-nxaxheba.
Ngelixa luqhuba uphononongo, uza ekliniki malunga namaxesha ali-16 kwiminyaka emi-3. Kutyelelo lwe-5 kula, uza kufumana izitofu zophononongo okanye oosinga-yeza. Uza kufumana izitofu ezi-8 zizonke ngexesha lophononongo.
Uza kucelwa ukuba ubhale phantsi indlela ovakalelwa ngayo kangangeentsuku ezi-3 emva kotyelelo lokutofa ngalunye. Wena nabasebenzi besayithi niza kuqhagamshelana ukuze kwaziwe indlela oziva ngayo ngeli xesha.
Utyelelo lolandelelwaniso luza kuquka iingcebiso novavanyo lwe-HIV, ukuphendula imibuzo evela kubasebenzi basekliniki. Olu tyelelo luza kubalufutshane kunolokufumana izitofu zophononongo.
Uza kuxelelwa ngezinye iindlela ezingcono zozikhusela kulosuleleko lwe-HIV.
LUZA KUQHUTYWA NINI, PHI OLU PHONONONGO?
Uphononongo luqalise ukubhalisa abathathi-nxaxheba ngo-Okthobha 2016 kwaye luyaqhubeka kwiisayithi ezi-15 kuMzantsi Afrika uphela.